‘जे सक्छौं गर, म हार्दिन’ | शहरबाट शब्दहरु
« कति छ मेरो तलब ?
दुष्ट छिमेकीका कारण खुट्टो सुन्नियो सरकार »
‘जे सक्छौं गर, म हार्दिन’
असोज १४, बिहिबार ।
समयको माग हो सुख वा दुःख । पीडा वा आनन्द । कस्तो सोचमा चलेको जीवनको प्रतिबिम्ब डरलाग्दो र उराठलाग्दो हुन्छ । समय त्यही हो । जसको हातमा सबै कुरा बाँधिएका छन् । आफू लगातार लम्किरहँदा कोही कसैलाई वास्ता गर्दैनन् । मलाई पनि यही समयले नै हो । वेवास्ता गरेको छ । पीडा दिएको छ । म लेख्न खोज्छु तर समय लम्किन्छ । अल्छि लाग्छ । भोली लेख्छु भनेर छोडिदिन्छु । यस्तै यस्तै ।
यता मसँगका पुराना धेरै सहकर्मीहरू छुटे । नयाँ जोडिए । साथबाट छुटेका सहकर्मीहरूको आ–आफ्ना सपना र लक्ष्य लिएर बिदा भए । म स्विकार्छु, मबाट पनि पनि धेरै कमी कमजोरीहरू भए होलान् । तर यसको क्षमा भनेकै साथीहरूसँग बिछोड बन्यो ।
फेरि आफ्नो नियमितता भनेकै अनलाइन पत्रिका दैनिकको दैनिकी संस्करणमा व्यस्तता । यसमा २४ घन्टा अल्झिएको छु । अरू पेशामा लाग्न सकिएको छैन । यसैमा केही गर्छु भनेर नयाँ सदस्यहरूको जोशपनि मिसाइयो । केहीसँग हारगुहार गरेँ । आफ्नै स्वार्थमा उनीहरूले सहयोग गर्छु भनेर करिब १५ दिन झुलाए । आज बल्ल टुंगो लाग्यो की ती वरिष्ठ महाशयले मुखको बोली मोडे । सम्भवत यही नै मेरो लागि उर्जाशिल क्षण बन्न पुगेको छ । मैले कुरा बुझेपछि भने, ‘समय यस्तै हो । धन्यवाद यतिदिन सम्म मलाई विश्वास गरिदिनु भयो ।’
लेख्न खोज्छु भन्दाभन्दै पनि धेरै कुरा लेख्न सकिँदैन । कतिपय कुराहरूलाई दबाउनु, कतिलाई निल्नु र कतिलाई ओकल्नु पर्ने हुन्छ । आज बिहानै एकजना मन्त्रीज्यूसँग करिब २५ मिनेट कुरा भयो । उहाँले सँगै विदेश भ्रमणको निम्तो दिए । आफ्नो कमजोरी भनेकै यस्तो अवसरलाई खासै महत्व नदिनु हो । यो मेरो अंहमता र घमण्ड होईन । महिनादिन अघिको भुटान भ्रमणपनि सिधै अस्विकार गरिदिएँ । समय हो बलवान । यसले अनेक खेल खेल्छ । उखानै छ, समय बलवान त गधापनि पहलवान ।
म प्रत्येक दिन जितिरहेको छु । तर केही मान्छेहरू मलाई हराउने खेलको डिजाइनमा व्यस्त छन् । म हार्दिन भनेर म जीवनसाथी सुनिताको विश्वासको डोरीको सहारामा छु । म पलपल सम्झाउने धूनमा आत्मविश्वासपूर्वक भनिरहन्छु, ‘समय मजबुर छ, यसले मलाई आज नभए भोली पक्कै उज्यालो साथ दिनेछ ।’ उनी स्तव्ध भएर सुनिरहन्छिन् । विश्वास गर्छिन् । अहिले मलाई समयसिमा समेत दिएकी छन् ।
This entry was posted on अक्टोबर 1, 2015 at 3:21 अपराह्न and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.